Al-Shabaab iyo dareeska Ciidanka! – Hornafrik Media Network
Hornafrik– Magaalooyinka Jilib iyo Saakoow ee Gobalka Jubada Dhexe waxaa ay Al-Shabaab ku soo bandhigeen dagaalamayaal iyo saraakiil geshan dareeska ciidamda dowladsa Soomaaliya , si gaar ah guutada 14-ka October.
Waxaa la is weydiinayaa sida ay ku heleen dareeska intaasi la eg ee tirada bdan , gawaari ay dhoolatus ku sameeyeena waxaa ay ahaayeen kuwo leh astaamaha lagu yaqaano gaadiidka dagaal ee Milatariga Soomaaliya.
Waa dagaalame Shabaab ah!
Waxaa ay ahayd fariin dhinacyo badan leh , hadii aan eegno dhanka Shabaab waxaa ay tusayeen indhaha kale in ay heystaan dareeska ciidamadda , balse halkaasi maxaa uga baxay dowladda?
Waxaa la tilmaamayaa in tani tahay mid loo baahanyahay in sirdoonka Soomaaliya iyo ciidamada amaankaba ay u noqoto calaamad digniin ogaadaana in Al-shabaab heystaan dhar badan iyo gaadiid aan si weyn looga aqoon kuwo ay ku socdaan ciidanka.
Lama oga jawaabta ay ka bixin doonaan saraakiisha amaanka Soomaaliya.
Xujeey Soomaali ah oo ku dhintay is buurka xajka sanadkaan.